Madaxtooyada oo war ka soo saartay sawir laga soo qaaday Isgoyska Soobe oo buuq ka dhaliyay baraha Bulshada – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeSoomaliyaMadaxtooyada oo war ka soo saartay sawir laga soo qaaday Isgoyska Soobe oo buuq ka dhaliyay baraha Bulshada
October 14, 2019 Ali Osman Soomaliya, Wararka maanta 0
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hadashay Sawir maanta lagu hadal hayay baraha Bulshada, kaasoo laga soo qaaday Isgoyska Soobe, halkaasoo maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayay laba sano guuradii ka soo wareegatay weerarkii 2017.
Agaasimaha Warfaafinta ee Madaxtooyada Soomaaliya C/Nuur Maxamed Axmed oo goordhow qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook, waxa uu ku sheegay in shakhsiyaad loo heeso ama loo buraanburo uu yahay dhaqan duugoobay oo aan loo baahnayn.
“Madaxda iyo dadka kale ee ammaanada bulshada loo wakiishay waxa ay khaldaan waa la sixi karaa, waxa ay hagaajiyeenna waa la tilmaami karaa balse in shakhsiyaad loo heeso ama loo buraanburo waa dhaqan duugoobay oo aan loo baahnayn” ayuu yiri C/Nuur.
Agaasimaha Warfaafinta ee Madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhinaca kale tilmaamay in madaxda sare ee dalka aysan ka warqabin Sawirka gaari la dhigay Taalada 14-ka October, kaasoo ay ku dheganaayeen Sawirrada Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Khayre, iyadoo Sawirku muujinayay in wixii la qabtay weerarka kadib ay labadan mas’uul ku koobnaayeen oo kaliya.
“Waxaa lamid ah qoladii maanta baabuurta kusoo buufisay sawirrada madaxda qaranka iyaga oo isu haysta in ay wax hagaajiyeen. Dhaqamadaas liita waa in la baabi’iyaa” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Si kastaba, Dadka adeegsada Baraha Bulshada ayaa soo qaadanayay Sawirka, iyagoo sheegayay in la xaqiray doorka Gudoomiyihii xiligaas ee gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed oo ahaa shaqsigii u horeeyay ee Dhiig ugu deeqa dhibanayaasha weerarka, isla mar ahaantaasina madaxda iyo Shacabka ugu yeeray iney Isbitaalada tagaan oo ay dhiigooda bixiyaan.
Dadkii maanta tagay Isgoyska Soobe, ayaa sidoo kale buuq ka dhaliyay madasha baroordiiqda lagu dhigayay, xili Gudoomiyaha gobolka Banaadir uu amaanayay Farmaajo iyo Khayre, iyadoo dhalinyaradii goobta ku sugneyd ay kula qeyliyeen inuu Gudoomiye Cumar Finish xuso kaalintii Thaabit Cabdi Maxamed.